७६औं जिल्ला चितवनमा तमासा
काठमाडौं । भरतपुर महानगरको मेयरमा जितपछि रेणु दाहालले भनिन्– बुवाको निर्वाचन क्षेत्र मजबुत भएको छ । अर्थात रेणु दाहाल प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन्, उनको जित भनेको प्रचण्डको संसदीय चुनाव क्षेत्र मजबुत पार्ने रणनीतिमात्र रहेछ ।
यसैले अहिले प्रश्न उठेको छ– भरतपुर महानगरको चुनाव देउवाले जिते कि प्रचण्डले । हँसिया हथौडाले जित्यो कि रुख चिन्हले ? कि अदालत, प्रहरी, निर्वाचन आयोग, राज्यसत्ता अथवा बाह्यशक्तिले जित्यो ? भरतपुरमा रेणु दाहालले सपथ खाइन् पदभार ग्रहण गरिन्, भोज चल्यो लाजिम्पाट र प्रधानमन्त्री निवासमा । यो भन्दा लोकतन्त्रको गाईजात्रा अरु के होला ?
लोकतन्त्रका नायक पात्र हुन् देउवा, प्रचण्ड । यी दुबैले जुन चरित्र देखाए, त्यो चरित्रले लोकतन्त्र जित्यो कि हार्‍यो, लोकतन्त्र विधिमा चल्यो कि गुण्डागर्दीको बन्दी बन्यो ? चितवन तमासा बन्यो, लोकतन्त्र यस्तै हो ?